पिट्सबर्ग च्यालेन्ज कप फुटबल प्रतियोगितामा आज भएको खेलमा पथरी एफ.सी. विजयी - Pahilo Online
पिट्सबर्ग च्यालेन्ज कप फुटबल प्रतियोगितामा आज भएको खेलमा पथरी एफ.सी. विजयी
पथरी । मोरङको पथरीशनिश्चरे–१० मा जारी पिट्सबर्ग च्यालेन्ज कप फुटबल प्रतियोगितामा आज भएको खेलमा पथरी एफ.सी. विजयी भएको छ । टाइब्रेकरमा पथरीले लेटाङसँग ३–० को जित निकालेको हो ।
पथरीशनिश्चरे–१० को प्रस्तावित रंगशालामा भएको खेलमा दुवै टिमले गोल रहित बराबारी खेलेपछि टाइब्रेकरमा पुगेको थियो । पथरीका लागि साइमन लिम्बु, निरज परियार, युगेश तामाङले गोल गरेका थिए भने मन्जिल खड्काको प्रहार लेटाङ एफ.सी.का गोल किपरले रोकेका थिए । यस्तै लेटाङका सुमन चाम्लिङ, यमन मगर, सन्दिप मगरको प्रहार पथरीका गोलकिपरले विपल तुल्याए ।
खेलको म्यान अफ द म्याच पथरीका एफ.सी.का गोलकिपर मनोज गुरुङ घोषित भए । उनलाई पथरीका समाजसेवीद्वय प्रदिपकुमार राई र कुलबहादुर गुरुङले नगद रु. २५ सय र ट्रफी प्रदान गरेका थिए । थ्री रिभर्स एफ.सी. अमेरिकाको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा झापा, मोरङ र सुनसरीको ९ र भुटानी शरणार्थीको एक टिम गरी १० टिमले सहभागिता जनाएका छन् ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलिको खेल लेटाङ फुटबल क्लब र पथरी फुटबल क्लब बिच हुने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिताको प्रथम र दास्रो हुने टिमले क्रमशः १ लाख १ हजार र दोस्रोले ५१ हजार नगद ट्रफी, मेडल र प्रमाण–पत्र प्रदान गरिने प्रतियोगिता संयोजक गणेश थक्लुङ लिम्बुले जानकारी गराए ।
शुक्रबार, १२ कार्तिक २०७८, १९:०२ October 29, 2021 मा प्रकाशित
राजु सोदेन स्मृति कपको उपाधि झापाले चुम्यो